Ma rabtaa in ay dib u aad xiriirada Android muhiim ah in aad kombuutarka ay dhacdo musiibo ah oo aad ku lumin? Just helay casriga cusub oo doonaya in ay soo dhoofsadaan xiriirada xoojiyaa? Halkan waxa ku jira saddex mar-badbaadinta tricks fudud oo loogu talagalay dadka jecel inay xiriir Android gurmad.
Habka 1: Xiriirada Android kaabta la MobileGo for Android Habka 2: Xiriirada kaabta Android inay Gmail Habka 3: Xiriirada kaabta ka Android la USB Cable Isbarbar u dhexeeya 3 Hababka Kor
Habka 1: Xiriirada Android kaabta la MobileGo for Android
Xiriirada kaabta oo dhan ama soo xulay in xusuusta telefoonka, Gmail, Twitter, Facebook, iwm
Xiriirada Android kaabta in PC, Outlook, Windows Cinwaanka Kitaabka & Windows Live Mail.
Midowdo xiriirada nuqul si khafiif ah Android Kitaabka Cinwaanka taleefanka.
Files dheeraad ah oo kaabta, oo ay ku jiraan, SMS, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda, xogta app, abuse call iyo warbaahinta.
Si fiican u shaqeeyaan HTC, Samsung, Google, LG, Sony, Motorola, Huawei, Acer, Asus, Dell, in ka badan halkan >>
Sida loo kaabta Xiriirada on Android la MobileGo for Android
Ka hor inta taageerto kor u xiriirada Android
1. U diyaar garoow: phone Your Android, cable ah USB (optional), PC ama Mac, Wondershare MobileGo for Android 2. Xiriirada kaabta in account: xiriirada kaabta in kasta oo account oo ay taageerayaan telefoonka aad Android. Log galay xisaabaadka ee telefoonka aad Android. Markaas, qaybaha xiriir ah la soo bandhigi doonaa in uu furmo. (Version Windows oo keliya)
Fiiro gaar ah : Hagaha soo socda isticmaalaa Screenshot version Windows. Habka loo fuliyo hawsha aad Mac dhow waa isku mid.
Si kastaba ha ahaatee, version Mac ah ma ogola in gurmad xiriirada ka xisaab in computer, Muuqaalka iyo kuwa kale. Ka sokow, version Mac aanay aad warbaahinta gurmad iyo xogta app ha
Tallaabada 1. dhigay aad Android Phone
Si aan ku bilaabo, download iyo rakibi Tababaraha this xiriir Android - Wondershare MobileGo for Android aad kombuutarka. Markii uu dhamaystay rakibo, waxaa idinku waajib ah in ay u maamulaan. Connect telefoonka aad Android in aad PC via cable USB ama via Wi-Fi. Barnaamijkan wuxuu si toos ah lagu ogaan doonaa qalab aad iyo waxa uu muujinayaa in uu furmo suuqa hoose. Markaas riix "Xiriirada" tab on Murayaad bidix si ay u soo galaan suuqa kala xiriir maamulka ah.
Fiiro gaar ah: Isticmaal WiFi siduu kan hore isku day? Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi MobileGo file apk .
Tallaabada 2. Xulo Back Up Android Xiriir
Suuqa kala xiriir maamulka waa sida hoos. Dooro xiriirada aad doonayay ka dibna riix Import / Dhoofinta button. Tani waxay keeni doonaa liiska hoos-hoos ah. dooran dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer ama dhoofinta dhammaan dadka ay khuseyso in computer . Markaas, liiska jiido hoos ah ayay u muuqataa on xaq, awoodo aad gurmad xiriirada in Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013, file vCard, Windows Cinwaanka Kitaabka, iyo Windows Live Mail.
Tallaabada 3. One Click to Xiriirada kaabta iyo More in Computer
In uu furmo suuqa ugu weyn, guji kaabta One-Click . Wada hadal gurmad ayaa soo baxa, kuwaas oo aad u ogolaanaysaa gurmad dhammaan dadka ay khuseyso, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, barnaamijyadooda, music, info playlists, video iyo sawiro. Si xiriirada gurmad on Android, kaliya aad u baahan tahay in aad uncheck faylasha kale oo ka dibna riix Back Up .
Habka 2: Xiriirada Android kaabta in Gmail
Haddii telefoonka aad Android aad u ogolaanaya xiriirada gurmad Android inay Google by syncing, waxaad isku dayi kartaa sidan.
Tallaabada 1. noqda aad telefoon iyo tuubada Android Goobta . Hoos shaashadda si aad u hesho xisaabta iyo hagaagsan .
Tallaabada 2. gasho xisaabtaada Google oo ka jaftaa nidaameed Xiriirada . Sug ilaa nidaamka hagaagsan waa dhameystiran yahay.
Tallaabada 3. Haddii aad ku badbaadi oo dhan aad xiriirka la leedahay in aad xisaabta Google, waxaad ka boodi kartaa labada tallaabo hore, oo si toos ah u gasho in aad xisaabta Google iyo dalka bogga Gmail kombuutarka.
Tallaabada 4. dooro xiriirada aad rabto in aad gurmad oo guji More > dhoofinta . Dooro qaab vCard iyo badbaadin xiriirada si aad PC. Waxaad ka furan kartaa oo iyaga u arkaan la Kitaabka Cinwaanka.
Habka 3: kaabta Xiriirada ka Android la Cable USB
Tallaabada 1. Tubada Xiriirada app telefoonka aad Android. Tubada menu si ay u muujiyaan liiska menu iyo dooran Import / dhoofinta .
Tallaabada 2. Tubada dhoofinta in USB kaydinta ama icon qaar ka mid ah in jeclaan
Tallaabada 3. Sidaas ayaad ha xiriirada Android gurmad in kaarka SD. Xiriiro badbaadiyey ee file vCard ah. Bareesada in cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay PC.
Tallaabada 4. Marka telefoonka aad Android waxaa Jaha sida flash ah, waxaa la furo iyo jiididda iyo hoos u file vCard in ay PC.
Isbarbar dhigga u dhexeeya 3 Hababka Kor
Content ka Nokia dhaqaaq Android
Xiriirada Transfer in Device Android
> Resource > Android > 3 Easy Siyaabaha Xiriirada Android kaabta fudayd